ကော်ဇောစက်ရုံ - တရုတ်ကော်ဇောထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ patchwork cowhide ကော်ဇောအတွက်အရည်အသွေးမြင့်နွားသားရေကိုရွေးချယ်ပါ။ အပ်နှံထားသောအပ်ချည်နှင့်လက်ရာသေသပ်သော overlock သည်၎င်း၏တာရှည်ခံမှုကိုသေချာစေလိမ့်မည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်တောက်ပသောအရောင်များသည်သင့်အိမ်ကိုသင့်လျော်သလိုအလှဆင်နိုင်သလိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အလှအပအရသာကိုလည်းပြသနိုင်သည်။
နာနတ်ဆိုတာဘာလဲ။ Sisal သည် Agave Sisalana ရှားစောင်းပင်၏အရွက်ရှည်များမှထုတ်လုပ်သောသဘာဝအမျှင်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးပြင်းလာသည့်နာနတ်တောင့်တင်းသောအမျှင်များသည်ချည်၊ ကြိုးများနှင့်ကော်ဇောကဲ့သို့များစွာသောခဲယဉ်းသောထုတ်ကုန်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်။ Sisal သည်သိသိသာသာစွယ်စုံသုံးနိုင်ပြီးအလွန်အကြမ်းခံသောကြောင့်အရောင်နှင့်ပုံစံများကိုကော်ဇောများနှင့်ကော်ဇောများထုတ်လုပ်နိုင်စေသည်။ ဘာကြောင့် sisal ကိုရွေးတာလဲ။ အလွန်အစွမ်းထက်သောနာနတ်၏အမျှင်များသည်ဧည့်ခန်း၊ မိသားစုအခန်းများ၊ ရုံးခန်းကဲ့သို့အသွားအလာများသောနေရာများတွင်ကောင်းစွာမတ်တပ်ရပ်လိမ့်မည်။
၁။ ဒိုဟာစုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်အစုရှယ်ယာမပါ ၀ င်ပါ။
2. Moq သည်အရောင်တစ်ခုလျှင် 300m2 ဖြစ်ပြီးပေးပို့ချိန်သည်ရက် 20 ဖြစ်သည်။
နိုင်လွန် Colorpoint-Airway & Seaway
၁။ Seaway & Airway စုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်အစုရှယ်ယာမပါ ၀ င်ပါ။
၁။ Apple X စုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်အစုရှယ်ယာမပါ ၀ င်ပါ။
၁။ Dunkirk စုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်စတော့မဟုတ်။
၁။ လန်ဒန်စုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်အစုရှယ်ယာမပါ ၀ င်ပါ။
၁. Old Town Sunshine စုဆောင်းမှုသည် ၂၀၂၀ ၏အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အရည်အသွေးမှာအာကာသအရောင်တင်နိုင်လွန် ၆ ကို PVC ကျောဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၂။ ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စုဆောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အရောင်တစ်ခု၏ MOQ သည် ၅၀၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုအချိန်သည်ရက် ၂၀ ဖြစ်သည်။
၁။ အဝါရောင်စိန်စုဆောင်းမှုသည်စီမံကိန်းတင်ဒါအတွက်အစုရှယ်ယာမပါ ၀ င်ပါ။